Ndị igwe kwụ otu ebe na -eme ego ahụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Trek na-ere ahịa dị m nso - otu esi enweta ya
Trek na-ere ahịa dị m nso - otu esi enweta ya
Ndị igwe kwụ otu ebe na -eme ego ahụ?
BụTrek ruru ego ahụ? Ee,Trek anyịnya igwedịuru ego ahụ.Mee njemngwugwu teknụzụ dị elu na nke haanyịnya igwe, ewu haanyịnya igwegburugburu akwa aluminom na okpokoro agba, ma jiri naanị ihe Shimano na SRAM nwere ntụkwasị obi.Eprel 23 2021
Maka ọtụtụ n'ime anyị, mgbe anyị zụtara igwe kwụ otu ebe ọhụrụ, isi okwu na-abịa ebe anyị ga-awụli elu na carbon mbụ anyị, mwụda ahụ na-esokarị obere mkpu mgbe kaadị kredit anyị kpọnwụrụ na mkpịsị aka anyị, ee, na anyị na-eme mkpọmkpọ ebe a n'ihi na a na-ahụkarị carbon dị ka ihe dị mma maka okpokolo agba karịa aluminom, mana olee otu igwe kwụ otu ebe si adị ndụ n'ezie n'okporo ụzọ mepere emepe ma e jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe aluminom? Ha abụọ nwere Bontrager Finishing Kit, dị ka ihe ị ga - ahụ n'ezie ma ọ bụrụ na ị daa na ndị na - ere ahịa Trek, ọ bụ ezie na ha fọrọ nke nta ka ha yie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihi na otu onye bụ SL 6 na nke nwere ike ịnweta egwu sitere na OC LV carbon fiber ọzọ otu ALR isii nke aluminom sitere na usoro Upalpha Anyị ga-akpọrọ ha maka ịnyagharị site na mpaghara anyị wee banye anyị ga-agbanweta ma kwughachi onye na-ebu ụzọ, ọ bụ ezie na mkpa akwụkwọ dị mma, anyị gwara gị na ịchọrọ iburu ụzọ mbụ a -abịa ka na-amalite na nke mbụ, anyị na-enweta ọnụ na ị na-emefu a otutu nke ike gị nwetara ego ebe a otú ahụ n'ezie ihe dị iche na nke a bụ n'etiti ihe dị ka narị asatọ na otu puku dollar ma ọ bụ ihe dị ka narị asaa pound na nke ahụ bụ maka a byte na ihe yiri nkọwa. Cheta na ihe dị iche na ọnụahịa bụ n'ihi na carbon bụ ihe na-arụsi ọrụ ike ma na-adịkarị ọnụ karịa ịme. Agbanyeghị, enwere m ike iche ije ije na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị na-achọ ịnyịnya igwe abụọ dị iche iche nwere ọnụahịa na ihe ndị yiri ya? N'okwu a, ikuku carbon gị nwere ike ịnwe ihe ndị dịkarịa ala ọkwa ma ọ bụ abụọ dị ala karịa ibe ya nke aluminom, yabụ ihe niile ga-adị ntakịrị karịa ma ọ ga-abụ na ị ga-enwe ọkwa nke carbon carbon nke ị nwere ike ịchọrọ.
Anyị emeghị nke a n'okwu a, agbanyeghị, n'ihi na ị ga - enwe ike iji etu esi atụnyere ihe abụọ ndị a dị iche iche. Nke a bụ nnukwu okwu, mgbe ị na - ekwu okwu na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị banyere carbon nke ọma na aluminom, ọ bụghị n'ezie isiokwu aghụghọ ma na nso nso a ka m gwara enyi injinia ọkachamara na ihe dị ka nke a wee mee nyocha na ụzọ emeghe? gbalịrị ịchọta ụfọdụ iche na-ada ada O kwuru n'ụzọ bụ isi na ọ fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume gụpụta iche dị na nkasi obi n'etiti abụọ okpokolo agba dabere na ihe ndị ọzọ dị ka gị taya otú obosara ha bụ ihe nsogbu ị nwere kaadị ọma ole Flex i nwere na gị sadulu ma ọ bụ oche gị? Ọ dị mma ma dị mma maka ya, mana anyị nwere ike ịhụ ọdịiche ọ bụla, mana ka ọ dị ugbu a, agbaala m igwe kwụ otu ebe maka ihe dị ka elekere elekere nke ọ bụla na taya ndị nwere otu nrụgide ahụ na m na-ekwu otu nsogbu ahụ, n'ihi na n'oge anyị nọ n'agbata ụkwụ abụọ ahụ agbanweela site n'echiche m, azịza nye ajụjụ a bụ ee ee echere m na ị gaghị enwe ike ịmị osisi ikuku carbon ma ọ bụ okpokoro carbon dị mma m ga-ekwu nwere obi ike dị ntakịrị n'okporo ụzọ, mana Echere m na eziokwu banyere nkasi obi na igwe kwụ otu ebe bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie karịa ndị a, ihe niile ị ga - eme bụ itinye na taya sara mbara ma belata nrụgide ahụ. Isiokwu na-esote bụ isi ike, nke dị ezigbo mkpa iji nyefe ike dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ mee ngwangwa site n'akụkụ nkuku igwe gị nwere, ma ọ dịkwa oke mkpa mgbe a bịara n'ịchịkwa igwe kwụ otu ebe, banyere nke a abụghị nke a na-ekwu ọtụtụ.
Ọ bụrụ na njedebe ihu gị esighi ike ọ ga - eme ka igwe kwụ otu ebe gị nwee ike kparịta nkuku ma gafee mpaghara siri ike ugbu a enwere ike ịtụle ụlọ nyocha na ụlọ nyocha mana kedu maka ebe a ma ugbu a, echere m na ọ bụ ọnụ carbon dị oke ọnụ karịa. na ọ bụrụ na i nwere ike inupụ n'ezie ike na odomo nkuku na mkpumkpu okporo ụzọ, m na uche, ọ na-ọzọ ekewet ma nke ahụ bụ naanị na ntụnyere kpọmkwem na nke ahụ bụ n'ezie a n'ezie ihe dị mkpa ee ee iche dị nnọọ aghụghọ na ị na-eche naanị ha ke akpa nkeji ise mgbe igwe kwụ otu ebe gbanwere a Mgbe ha ghọtara na ihe dị iche bụ nnọọ obere, ma ihe dị iche ka bụ na-ekpe ekpe dịkwa mma nke mere na nke ahụ bụ nnukwu iche iche si anya doro anya na anya si anya ka anyị tinye ndị a abụọ wiil na akpịrịkpa n'ezie, ya mere, wheel wheel na-abịa ebe asaa ise ise kilogram itoolu, aluminom a na-abịa asaa isi asatọ asaa, ya mere a dị iche ed nke narị abụọ na iri asatọ grams, ọ bụghị nnukwu ihe ijuanya tụlee na na gen eral, a ga-eme okpokoro agbaji ihe dị ka narị gram anọ na-acha ọkụ na ọ bụ aluminom, ee, mana kedu ihe nchekwa ego ndị a pụtara n'ezie na ụwa n'ezie? Tesla, onye dị ihe dị ka gram iri atọ dị ogologo na narị mita ise n'ịdị elu, igwe kwụ otu ebe a bụ 25 sekọnd ngwa ngwa na nke ahụ bụ na nnukwu ya na otu arụmọrụ ahụ adịghị ada ka nke ukwuu, ee e na n'ezie ọ bụghị nke ukwuu, m na-ekwu , ọ dịghị mkpa, Ọfọn, na dị na-adabere dị ka m kwuru na ọ na-aga ngwa ngwa nke ahụ bụ eziokwu ma ọ dị mkpa na-adabere na gị na ihe ị chọrọ ga-esi gị igwe kwụ otu ebe ka ndị kasị mkpa isiokwu nke ihe niile na ugbu a anya eke oge a Aluminom okpokoro osisi bụ nke gị Carbon ibe ya enweghị ike ịkọwa. Were usoro trekalpha na dịka ọmụmaatụ leta na okpokoro a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na-enweghị ntụpọ na tubes hydroform dị ka ọmarịcha ma mara mma na ọdịdị dị ka okpokoro carbon niile, n'agbanyeghị na ha bịaruru nso ma ị nwere ike ịkọ ọdịiche ahụ ma ọ bụrụ na enwere ọ bụla E nwere ọgba aghara naanị ime kụrụ aka ule na-ahụ na carbon okpokolo agba bụ uru nke ego ọ dịghị ee anyị na-adịghị na-ekwu na carbon nwere uru na n'oké arụmọrụ, ihe dị iche bụ, ọ bụ ezie na dị ka ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ka dị mma, ee e, ọ bụghị ihe pụrụ iche mgbe ị jiri ya tụnyere obere obere osisi si na otu ụlọ ọrụ ahụ, mgbe ahụ, ajụjụ bụ, matedo, ị ga-enweta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe na ọnụ ala karịa. ee, a ga m eme ya, ma na nke a otu osisi a na-ahụ anya na osisi aluminom, etiti ahụ ga-abịa I wü rde opt for a carbon frame ee m chere na m ga-ekwenye na ihe abụọ ahụ, aka ahụ dị mma, dịkwa mma w ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ntakịrị ihe ọmụma banyere ihe ndị anyị na-ekwu maka ebe a ma ọ bụrụ na ị pịa n'elu, anyị nwere isiokwu gbasara ihe ị na-amaghị, eriri carbon na n'ụzọ dị mfe ebe a ihe ise ịmaghị banyere aluminom, gbaa mbọ hu na ị gụrụ GCN tupu ị gawa ndị nọ ebe ahụ, pịa ụwa niile
Kedu nke ka mma Norco ma ọ bụ njem?
Ọ bụnorconweremmandụdụ,mee njemnweremmabrekị, a ibu nwere ikemmaderailleurs / shifters wdg ọ bụ ihe ahịa, ị nwere ike ịchọpụta na ha na-agba ịnyịnya yiri nke ahụ na ụwa n'ezie. Ikwuru, họrọ nke ọ na-adị, na-agba ịnyịnya na anyammanke gị.Jul 21 Dec 2019
N'oge a ọ na-esiri ike ịchọta igwe kwụ otu ebe nke na-adabaghị na mkpa gị. Si ìhè nzọ ụkwụ anyịnya igwe na nnukwu enduro sleds, ha na-ahụ maka onye ọ bụla. Mana oge ụfọdụ ọ nwere ike isiri anyị ike ịme nhọrọ.
Ihe edeturu nke a, nabata ahịrị igwe pink ọhụrụ, The Matchup, ebe anyị na-elele igwe kwụ otu abụọ dị iche iche sitere na otu onye na-emepụta ihe ma tinye ha megide ibe ha dabere na njirimara, njigide, na jiometrị ziri ezi bụ Aiden Oliver nwere igwe pink. Nke mbu bu Norco Optic na Norco Sight (upbeat) Norco bidoro na 1964 site na nwoke aha ya bu Burt Lewis. Onye mbu mepere ulo ahia ma gbanwee ulo okuko na Burnaby BC.
A na-akpọbu aha ahụ Northern Cycle Industry, mana ha gbanwere aha ahụ ngwa ngwa na Norco na 1968. Mgbe akara ahụ ghọtara na aha ahụ agaghị adaba na dan tube ma ọ bụ ọkpọ isi igwe kwụ otu ebe. Norco aghọwo otu ihe ọhụụ na ọnọdụ freeride na-apụta na ụsọ oké osimiri nke ugwu Vancouver.
Na ntọhapụ nke akụkọ ntụrụndụ Bi kes. Dị ka A-akara, VPS 1, ndị a na-egbutu ụmụaka ndị ọhụrụ dị jụụ na ụwa ịgba ígwè. Ngwa ngwa ngwa na 2020 na nchara nchara Norco, nnukwu nhọrọ nke igwe kwụ otu ebe maka ọzụzụ niile.
Site na XE ruo na ndagwurugwu, ihe ndị a ka nwere ike ịchapụ akpụkpọ anụ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe gị. (Joy music) Ya mere, lee Norco n'anya. E bipụtara ya na 2012.
Ọ bụ inch 26 ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Na-eti mkpu ka wiilị 26 inch. Ma kemgbe ahụ, ịgba ọsọ enduro abụrụla ihe na-ewu ewu.
The wiil emewo ibu na ndị agadi igwe kwụ otu ebe agbanweela a ukwuu. 4.0dị 4.0 nke visor bụ ụdị ọhụụ Norco nke igwe kwụ otu ebe.
Ndị a bụ wiil nke 29 ma ọ bụ 27.5. Ejiri ndụdụ ahụ ruo 160.
A na-eme ka njem nkwụsịtụ azụ gaa na 150. Ejiri usoro ịkwọ ụgbọala nke Norcos mepụtara visor a ebe a. Ihu, họrọ ihe niile ị chọrọ.
Nke a nwere ihe kachasị Rockshox Link ndụdụ. Rockshox Super Deluxe damper, Sram code, RSC breeki ájá. XO1 Ugo ugbo ala.
Anya co Ọ na-onwem na a carbon n'ihu ọgwụgwụ, carbon oche mụ na aluminum yinye na-anọ. Nhọrọ alloy zuru oke dịkwa. Ahịa ahịa si 2800 ruo 7100.
protein ntụ ntụ maka ụmụ agbọghọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ etiti na damper, ọ bụ 3049. Na na size ụgwọ nnukwu na-abịa na na 32 pound. Ekewaputara ihe omimi na 2016.
Ọ bụ XE igwe kwụ otu ebe ma na-anọgide na-agbanweghi agbanwe ruo ọtụtụ afọ. Mana maka 2020 ihe nyocha ahụ na-edozigharị aha ha - ma a bịa na geometry, ị ga-ahụkarị na igwe kwụ otu ebe na njem dị ogologo ma ụdịdị dị iche iche bụ otu. Ọ bụ n'ezie ezigbo siri ike chepụta ihe a igwe kwụ otu ebe bụ ihe niile banyere, ma luckily Mike Levy bụ ebe a.
Yabụ na anyị ekwesịghị ịkpọ ya Ọchịchịrị Obodo Na-eji Ọchịchịrị nke nwere millimita 125 nke njem azụ, 29 inch wiil na 140 millimeter fork fork bụ ụdị CT nke na-abịa na Rockshox Pikes Họrọ tinyere ndụdụ na GX Ea. Anapụta bụ gle drivetrain Shimano 4-piston brek. Ma na-akpali mmasị, a na-eji ụdị ejiji dị iche iche ejiri Rockshox, a super deluxe Ultimate DH damper na-ege ntị maka ịkwọ ụgbọala ike, sitere na $ 3,749 na $ 9,000 maka eriri eriri eriri mmiri.
Ọ bụrụ na ihe niile ị chọrọ bụ eku na damper, ọ bụ $ 2500. Na wuru onye a na nnukwu onye na-abịa na 30 pound. Kedu nke dị paụnd abụọ karịa ihe nkiri visor na visor geometry sitere na usoro mgbatị igwe kwụ otu ebe nke Norco.
Na na, na a nutshellll, pụtara na nke ọ bụla igwe kwụ otu ebe na-enweta ya pụrụ iche jiometrị. Na a n'azụ igwe kwụ otu ebe nke na-etolite na n'ihu wheel. Ebumnuche Norco bụ mgbe niile iji hụ na etiti nnukwu ikike nke onye na-agba ya na-edozi n'ime igwe kwụ otu ebe.
O nwere ike ịdị ka ihe na - enweghị isi, mana ọ na - emegide ụkpụrụ maka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na anyị etinye anyịnya igwe ndị a n'akụkụ ibe anyị. Anyị na-amalite ịhụ ụfọdụ isi iche.
Anyị na-ele anya na akụkụ isi. Ihe nlere nwere 64 mgbe ngwa anya nwere 65. Site na ndị nwere ụdị ogo a, visor nwere 440 millimita na-anọ, ebe ngwa anya nwere 435 milimita na-anọ.
Anyị na-ele anya na nso. Visor bụ 485, ebe optic bụ 480. Nke a n'ezie 24 millimeters kwesịrị inye n'ọnọdụ.
A ubi a kụrụ ọzọ na nzọ ụkwụ. Ihe ngwa anya bụ ihe na-emetụ mkpụmkpụ ma dị ntakịrị. Yabụ ị nụla nke ọma n'aka m site na ịlele nọmba, igwe kwụ otu ebe a nwere geometries na ihe ndị yiri ya, mana kedụ nke kacha mma na ha? Ọ bụ ezie na akụkụ na ngwa anya yiri visor ma kwesiri ime ka ị na-agba ịnyịnya.
Ọ nwere naanị 125 millimeters nke ndị njem na ndị na-agba ịnyịnya kwesịrị iburu nke ahụ n'uche. Norco, echefula ugwu dị elu. N'ihi na ha na-enye ọdịdị ahụ oche nkuku dị larịị ma belata ihe dịtụ mfe.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nke na-arịgo ọtụtụ ma na-eme ụfọdụ ụzọ ụkwụ na-asọ ma ị ga-achọkwa iso ndị ọzọ na-agba ịnyịnya enduro. Could nwere ike ịbụ ụdị ọkwọ ụgbọ ala nke Norco mere maka anya. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nke na-ede ụzọ ụgbọ ala siri ike na nke dị larịị, mana yana ụzọ dị nro nke oge niile na ohere ịnyagharị ugwu niile anya bụ ihe dị mma ịtụle.
Nkọwa Norco dị ka echiche bụ ezigbo ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Nke a bụ a na udi na e merisị ndị enduro anyịnya igwe, ma nke a bụ ihe zuru okè ihe atụ nke mere na ọ bụ a udi na-agaghị anwụ anwụ ma ọ bụrụ na i nwere ya. Norco visor guzo megide Norco optics.
Mee ka anyi mara n’ime ihe nke masiri gi ma mee ka anyi mara igwe igwe abuo ichoro igha agbagha ibe gi n’oge ozo. (egwu music)
Kedu ihe ka mma njem ma ọ bụ Pụrụ iche?
Enweghị onye mmeri doro anya. Ha abụọ na-enye igwe kwụ otu ebe na akụrụngwa n'otu ụdị ọnụahịa.Mee njemnwere wider dịgasị iche iche nke igwe kwụ otu ebe ịhọrọ site na iji ya tụnyerePụrụ iche. Na nbanye, ị ga-enweta ntakịrịmmaakụkụ mgbe ị na-agaPụrụ iche.
Ọzọ, anyị ga-ekwu maka igwe kwụ otu ebe - ị nwere ike ime mpụga ọzọ - ee. Adịghị ele gị anya (onye ọ bụla na-achị ọchị) - 'Hey Max, m kwesịrị ịme mpụ ahụ ugbu a?' (ufiop energetic music) (cyclist iti mkpu) (soft energetic beat) - Hey onye ọ bụla na-anabata gị azụ na cross-mba ubi ule. Taa bụ oge okirikiri ma anyị na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè.
Sarah Moore nọ na aha ọhụụ Epic pụrụ iche, ọhụụ ọhụrụ nke Cannondale, Treks Supercaliber na Canyons Lux. Onye ọbịa pụrụ iche taa Mike Kazimer si USA. Ọ chọrọ n'ezie ka mụ na Lycra nọrọ ebe a, mana ọ tọrọ atọ na United States, a na-emechi oke ala Taa ọ na-eme mkparịta ụka ahụ, na kọmputa - Kpọmkwem, anwansi nke ịntanetị, enwere m mwute na anaghị m ' nwee Lycra ma soro gi gafee ohia.- M ga-eleta gị n'oge na-adịghị anya Kazand anyị ga-eme obere ụgbọ elu lycra ọnụ. - Ọ dị mma.
Ngwa, ka anyị malite site na ajụjụ onye ọ bụla ga-achọ ịma. Sera, kedụ ihe kacha amasị gị n’ime anọ ndị a? - Ya mere, echere m na enwere m mmasị na Epic Pụrụ Iche, geometry a nke oge a nke na-agbaghara n'ezie n'ihe banyere traction, ọ bụ n'ezie, mana Cannondale Scalpel, echere m na nkwụsịtụ ahụ dị ntakịrị karịa amụma na ogologo ụbọchị. (Mike Levy hums na nkwekọrịta) - Ee - Agbụrụ agbụrụ World Cup na-asọpụrụ ụbọchị ndị a.
Know mara, (Mike Levy na-ekwenye na ya) ndị mmadụ na-elelị ihe ndị a na-eme n'ihi na ha na-eyi lycra. Ha anaghị eyi akwa ikpere ma na ị nweghị ihu zuru ezu, yabụ na ị na-eche na mpaghara ahụ dị mfe. (Mike Levy hums na nkwekọrịta) Canyon Lux, ma eleghị anya ọ bụghị nhọrọ m mbụ, ntakịrị ihe ị maara, ọ bụghị nke ahụ dị mfe ịnya na akụkụ steepụ.
peloton igwe kwụ otu ebe
Ctiondọpụta mmadụ mma adịghị mma. Echere m, ọ bụrụ na m chọrọ ịga ịnya anyịnya Otu oge ugwu ugwu, ma eleghị anya nke a ga-abụ igwe kwụ otu ebe m ga-ahọrọ, mana ọ bụghị ihe kachasị amasị m ime, ya mere - Ya mere Sarah, nke ahụ na - eduga n'ajụjụ na - esote.
N'ime igwe kwụ otu ebe ndị a niile, Lux bụ igwe kwụ otu ebe kachasị ewu ewu? - Eeh. Maka di na nwunye. Echere m na nkwusioru ahụ abụghị nke ahụ na-arụsi ọrụ ike, ọ naghị eji 100 millimeters eme njem.
M chere na ụdị crumpled oge ọ bụla m nọ a igwe kwụ otu ebe, ọ dị m ka m na a na-ele, nwere na n'ezie ogologo azuokokoosisi na mgbe ahụ na lockout Nchikota na dropper posts, (Mike Levy hums na nkwekọrịta) na-akụda mmụọ kpoo ya. Ya mere, ee, echere m na Canyon Lux bụ ihe dị mfe, na maka m, ị maara, achọghị m itinyekwu oge na igwe kwụ otu a - yabụ Scalpel bụ ọkacha mmasị gị, Lux nwere ike bụrụ ọkacha mmasị gị, ma ọ bụ maa nke gị ndị mmadụ na-enweghị mmasị, mana enwere otu igwe kwụ otu ebe ịchọrọ iji oge dị ukwuu karịa? Kwuo na ọ dị gị ka ị na-achọpụta ya, mana ịchọrọ obere oge iji wee mikpuo onwe gị na ya? - Eeh. Echere m na Epic Pụrụ Iche Enwere m obi anụrị ma echere m na ọ bụ n'ihi na emeela m ule na azụ na igwe ndị a niile, ụbụrụ chọrọ obere oge (Mike Levy na nkwekọrịta) iji mee ya na kwa mgbe ị na-agba ịnyịnya ya, ịmara na ọ dị mfe iji ya karịa iji ịnyagharị azụ na igwe kwụ otu ebe zuru ezu - yabụ Sarah, Epic vesos scalpel, ọnụọgụ geometry abụghị nke tere aka, mana Epic nwere ụbụrụ a -Irụ ọrụ, ụdị valvụ ahụ na-enweghị atụ nke na-eme ka ọ dị iche? - Ee, m hụrụ ya n’anya ka ụbụrụ na ị gaghị eche echiche ma ghara iji mkpọchi mkpọchi.
Ọ bụ superbar njikwa. Ma mgbe ahụ, ee, mgbe ike gwụrụ gị, ịchọghị n'ezie iche echiche banyere ịmeghe nkwusioru gị tupu ị gbadata, ihe teknụzụ, nọ n'ọnọdụ ahụ mgbe ị rutere ugwu wee chefuo kpọghee ekwt ya na mgbe ọkara ala ugwu ị na-eche m n'ezie nnọọ sketchy na m cross obodo bike nke siri ike iji na-agba ịnyịnya na niile ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-eche banyere ya, nke ahụ bụ oké. Ya mere echere m na Brain Pụrụ Iche na-eme ọtụtụ ihe n'ụzọ ziri ezi ma ana m atụ anya itinyekwu oge na ya - nke bụ igwe kachasị ọsọ ndị a? You na-atụle arụmọrụ ahụ, dabere na ule arụmọrụ na naanị oge ngụkọta gị, nke kachasị ọsọ? - Na arụmọrụ nyocha, Canyon Lux kachasị ọsọ nke ọgba tum tum ndị a niile.
Pụrụ iche Epic ji sekọnd isii nwayọ ma ekwere m ma ọ bụrụ na anyị echeta n'ụzọ ziri ezi. - Yup, Yup - Ya mere, na ngwa ngwa ngagharị ọ na-adọrọ mmasị, n'ihi na ọ dị ka ihe niile agbanwere. (Mike Levy hums in nkwekọrịta) Ya mere, Canyon Lex bụ n'ezie onye m dị nwayọ nwayọ n'oge nkedo, mgbe ahụ Pụrụ Iche weere ọnọdụ nke abụọ, ọ bụkwa mpempe akwụkwọ Cannondale na - ee - ya - ee - ọ nọ n'ezie, na-agbaghara nkwụsịtụ nke kachasị ọsọ ọsọ. na usoro mara mma nke Rudy anyị.- Ee, echere m na nke a bụ ezigbo ihe atụ nke ụfọdụ ule ụwa, ị maara, Ọgba ọkụ a nke anyị na-eji maka arụmọrụ arụmọrụ abụghị, m na-ekwu, ọ dị na ụwa n'ezie , ma ọ bụghị n'ezie ma merie ule ahụ.
Mana na oge anyị dị ogologo ma ọ bụ na-agbakwunye otu egwu, ọ dị aghụghọ, ọ na-amị amị. Ọ gara nke ọma. (Sarah wutere na nkwekọrịta) Ee - Ma yabụ ị ga-etinyekwu oge na agbụrụ mba, nọ na ngwongwo gị - Ọtọ.
Know mara na nke ahụ bụ ntakịrị - Ee - na-esikwa ike karị. Ugbu a ị bụ 'M ga-enwerịrị ahụmịhe, a na-ewu ọgba tum tum ndị a niile dịka ọgba tum tum asọmpi World Cup, ebee ka ị ga-ahụ ọdịnihu ha? Dịka ọmụmaatụ, ị chere na ọgba tum tum na-agbaghara mgbaghara bụ ọdịnihu, ị maara, oche oche vario na ụdị ihe ahụ? Ọ dị ka ụdị Levy ga-ekwu maka ya, mana ị chere na e nwere ihe ụfọdụ gbasara igwe kwụ otu ebe anọ a nke na-egosi na ị masịrị gị n'ezie, dịka nduzi na-aga? - know mara, kaniyon na Trek Supercaliber, anyị nwere ike ịhụ na ha ga-enwetarịrị akụkụ isi dị nkọ karị, ntakịrị karịa iru. Mana echeghị m na anyị ga-ahụ nnukwu mgbanwe ọ bụla n'ụdị a n'ihi na ha bụ ndị agbụrụ. - Ee.- Ha bụ, ị mara, gbalịrị ma nwalee, mana m na-ekwu na enwere ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu ebe ahụ bụ ndị nwere nkwenkwe ụgha.
jụụ cruiser anyịnya igwe
Ọ bụrụ na ị merie ọgba tum tum, ịchọrọ ka ọ dị - nri - dị iche kpamkpam? Ọbụna dị ka agbụrụ ịgba ọsọ, ị ka chọrọ njikwa ahụ. Ọ bụrụ na ị dị ka mmadụ 160 na (Mike Levy hums na nkwekọrịta) na ụfọdụ agbụrụ ndị ahụ, dị ka ụmụ nwanyị 85 na 100 nọ n'ọhịa ụmụ nwanyị, ị ga-enwe ike ịmegharị ụzọ gị site na ndị mmadụ, mee mkpebi ngwa ngwa, gị mara, a mkpumkpu otu igwe kwụ otu ebe ga-aka mma na ya. - Ya mere, anyị nwere ọkacha mmasị gị, nke kachasị amasị gị, na ị ga-achọ itinyekwu oge, mana enwere igwe kwụ otu ebe nke juru gị anya? Kedu igwe kwụ otu ebe ka ị jiri obere echiche dị mbụ wee ju gị anya mgbe ị gbafere n'ụzọ ahụ? - M na-ekwu Cannondale Scalpel.
Atụghị m anya ịpụ na nke a nakwa na nke a (Mike Levy na-akwado ya) ga-abụ igwe kachasị amasị m niile. Na mgbe ahụ m na-ekwu, dị ka otu ụdị yana n'ozuzu, O juru m anya na enwere m ahụ iru ala dịka m mere, ị maara, na-agba ọsọ maka ọdịda ndị a. Know mara, afọ 10 gara aga mgbe m mere agbụrụ agbụrụ, echeghị m na ntụsara ahụ na ọdịda (Mike Levy na-achị ọchị) - Oge dị iche iche ugbu a - enwere m mmasị ịnyịnya igwe dị iche iche, nke dị mkpụmkpụ.
Yabụ ka anyị lelee igwe kwụ otu ebe ndị ahụ ugbu a ma ịmara mgbe ị 'Mgbe ị na-agba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu enduro, ị na-eche,' Phew, ndị a bụ, ị maara, oge ochie. 'Ma ọ bụrụ na ị na-ele anya n'okporo ụzọ ụgbọ ala na-agafe agafe 10 afọ gara aga (Mike Levy hums na nkwekọrịta) otu anyị kwesịrị isi yi ihu na ikpere ikpere. - Ziri ezi? (ato ato) - Anyi na etinye ndu anyi na ndu.
Oge ọ bụla anyị gara - Kachasị! - n’ọsọ. - Ee / Ee. Ya mere, igwe kwụ otu ebe ndị a na-enwe mmetụta dị mma karị dị ka otu na ị na-achịkwa Kaz nke igwe kwụ otu ebe m na-eche na anyị ga-eme obere njem na ịnyịnya ọnụ.
You kwenyere, Kaz? Aga m enweta lycra- Nke ahụ dị m mma. Achọrọ m ka ọ dị n'ihu. Etinyere m lycra. (Sarah chịrị ọchị) Ọ dị mma.
Ka anyị zute ya. (egwu siri ike)
Gịnị mere treks ji dị oke ọnụ?
A na-eme ọtụtụ n'ime ha maka ha site na otu ndị nrụpụta na-eme igwe kwụ otu ebe maka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ruo mgbe ọnụahịa gafere ọtụtụ puku dollar, igwe kwụ otu ebe bụukwudị nnọọ ka ịnyịnya ígwè ọnụ yiri nke ahụ sitere na ndị niile na-asọmpi ha. Ka ọnụahịa na-arị elu, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ụdị ndị a.
Kedu nke kachasị mma ma ọ bụ Diamondback?
Agbanyeghi otutu mmadu kwenyere na nke ahuDiamondbackigwe kwụ otu ebe bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-agba ịnyịnya na-ejighị n'aka na ha ga-etinye aka na egwuregwu ahụUsoroigwe kwụ otu ebe na-egbo mkpa onye ahụ na-agba ịnyịnya bụ onye na-etinye ego mbụ na ntinye ego.
Kedu ka ịnyịnya ígwè Norco si dị mma?
Norcona-eme ka ọ dị eluanyịnya igweadabara ụdị ndị na-agba ịnyịnya niile.Norcobụ nnukwu Canadaigweụlọ ọrụ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 60. Ọ bụ ezie na ha abụghị nhọrọ mbụ maka ndị na-agba ịnyịnya na Europe na US, ogo nkeIgwe Norcobụ na par na ọtụtụ ndị ọzọ na-ewu ewuigweụdị.June 3. 2021 g.
Kedu ihe ka mma Giant ma ọ bụ Trek?
N'ozuzu,Nnukwudị ọnụ ala karịaMee njem. N'ihi ebe esi arụpụta ha,Nnukwunwere ike idozi ụgwọ nke igwe kwụ otu ebe.Mee njemigwe kwụ otu ebe na-enye njem mmefu-enyi na enyi, mana igwe kwụ otu ebe, na nkezi, dị oke ọnụ karịa ịzụta.
Ndi Giant ma obu Trek ka nma?
Diamondback ọ bụ ezigbo akara?
Ezie na amara maka ya oké ọnụ anyịnya igwe,Diamondbackna-emekwa ụfọdụ ụdị dị elu, ọgbara ọhụrụ maka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na ịgba ịnyịnya ugwu. Hzọ igwe kwụ otu ebe ya bụ Haanjo bụ otu kachasị dị na ya, nwere nhọrọ maka njem, njegharị na gravel ịnyịnya nke mere ka ọ bụrụ ọkacha mmasị n'etiti ndị editọ anyị.23bọchị 23 2018
Diamondback ọ gaferela mma?
Usoro braking siri ike mgbe ejikọtara ya na taya ya na-adịgide adịgide na ụlọ ahụ na-agbanwe agbanwe zuru ezu iji mee nke aezizụta maka onye mbido igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ onye na-agba nke etiti. Mgbe ị gbakwunye na nhọrọ jikọtara ọnụ, nkwusioru, na ndị ọzọ, ọ na-eme ka otu igwe kwụ otu ugwu siri ike ma nwee ntụkwasị obi.
Ebee ka m nwere ike ịhụ igwe kwụ otu ebe nọ n'akụkụ m?
Jiri ndị na-ere ahịa na-ere ahịa mmekọrịta anyị ka anyị chọta ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe dị gị nso. Anyị ga-enyere gị aka ịchọta igwe kwụ otu ebe na akụrụngwa zuru oke maka agbanyeghị mmasị ị na-agba ịnyịnya, ma ị na-achọ ugwu, okporo ụzọ, ma ọ bụ ngwakọ ngwakọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'etiti.
Ebee ka ụlọ ahịa Trek dị na Coeur d'Alene?
Klọ ahịa Trek Bicycle Coeur d'Alene bụ ụlọ ahịa ịnyịnya ígwè zuru oke na onye na-ere ahịa naanị maka TREK na Eke ịnyịnya ígwè. Anyị nọ n'ime oghere emere ọhụụ ọhụrụ na 1104 N 4th St na Coeur d'Alene, ID. Klọ ahịa Trek Bicycle Coeur d'Alene bụ ụlọ ahịa ịnyịnya ígwè zuru oke na onye na-ere ahịa naanị maka TREK na Eke ịnyịnya ígwè.
Ebee ka m nwere ike zụta igwe kwụ otu ebe dị na Trek Electra?
TrekElectra brandBontrager brandTrek Travel United States / English LOG IN / SIGN UPperson person Banye / banye uparrow_forward shopping_cart0 Electra ika Electra ika BIKES Back SHOP BY CATEGORY SHOP BY Model E-bikes Comfort Cruiser Urban & amp; COMMUTER Kidsmụaka 'plọ ahịa anyịnya igwe niile Townie Cruiser Loft Kids' Shop all anyịnya igwe E-BIKES Back